WQGS Submersible maloto Pump - China Shanghai Søg paompy
WQGS sy GWQ andian-dahatsoratra tsy clog moto paompy anaty rano dia natao tanteraka, vokarina ka naka fanahy araka ny havana fenitra-pirenena, dia azo ampiharina ho an'ny ara-barotra rano fako, fako isan'andro ny rano, drainage rafitra ny tanàna fako rano.
1. Ambient hafanana: 0-40 ℃
2. Maximum hafanan'ny rano + 40 ℃
3. PH haavon'ny avy 4-10
4. Maximum rano hakitroky 1,2 * 10kg / m³
5. Power matetika no 50Hz. Anarana malefaka dia 220VAC ho an'ny tokan-tena dingana
Ary 380VAC dingana telo ny isan-karazany avy amin'ny -100% ka hatramin'ny 10%.
6. Ny firobohana lalina lalina avy 0.5m-5m
WQGS andian-dahatsoratra tsy clog anaty rano moto paompy no ampiharina ho an'ny marary mitsika ny zava-dehibe maloto fako rano ao amin'ny orinasa sy ny ara-barotra toerana, maloto kosa natopiny toerana amin'ny ponenana faritra, drainage rafitra amin'ny tanàna efitra rano fitsaboana fototra, kosa natopiny toerana ho an'ny sivily fiarovana, famatsian-drano amin'ny paompy rano fototra, maloto fahafahana amin'ny hopitaly sy ny trano fandraisam-bahiny, fanorenana toerana ny kaominina tetikasa, fikarohana, toeram-pitrandrahana, metanina ambanivohitra dobo, fambolena fitarihan-drano sns mba hanafaka fandaniam-poana ny rano sy ny loto misy granules, ary koa ny rano madio sy ny mpanao mazia manimba tsikelikely.
1.Insulation mpianatra: F
2.The rano-mahatohitra impeller ny QT 450-10 fitaovana.
3.Stainless vy lavaka fanitarana, carbide roa -sides mekanika famehezana.
4.Double fantsona impeller, mikoriana tsara fahaizana, tsara hydraulic fampisehoana.
Tsy voatery Available amin'ny Request
Hafa malefaka na matetika dia 60HZ
Number Type Flow hydraulic lohany RPM Zintin'aratra Power Haavo
Sary amin'ny lafiny fametrahana ny WQGS (GWQ) andian-dahatsoratra tsy raikitra anaty rano akaiky paompy maotera.
Fametrahana, ary ny fikojakojana Operation Toromarika:
● Efa voarara ny mitarika telegrama amin'ny kery eo amin'ny fametrahana sy ny fanesorana ny herinaratra paompy mba tsy tariby fandikana no mpiray delinking izay mitarika ho amin'ny ara-dalàna fandidiana tsy fahombiazana ary na dia may;
● Mba hahazoana antoka marina sy azo antoka telegrama earthing amin'ny fametrahana ny herinaratra paompy. Dia voarara ho an'ny olona na ny biby ny rano hanatona miasa faritra na hikasika ny herinaratra paompy rehefa miasa. Mba hampihenana ny herinaratra dona loza, dia afaka mifandray ihany amin'ny earthing plug;
● asa be loatra dia voarara;
● Ny telegrama mifandray amin'ny paompy dia tsy tokony ho latsaky ny 1.2 fotoan 'ny herinaratra paompy faritra;
● Ny paompy herinaratra dia tsy maintsy hisy hitsatoka amin'ny fametrahana. Fa ny telegrama tsy azo miady saina na hanodinana ny miaraka amin'ny herinaratra indray mandeha ny paompy nanomboka;
● Raha vao ny paompy tsy mamokatra rano tao amin'ny fandidiana, ny herinaratra tokony homarinana avy amin'ny teny paompy na inona na inona mifanohitra fihodinan'ny na ny maso miditra tsimoramora teo amin'ny ranon'i fivoahan'ny tokony homarinana avy amin'ny teny vava na inona na inona residual rivotra;
● Dingana-to-dingana sy ny havany tany-to-tany insulation fanoherana ny maotera ny herinaratra paompy tokony nandinika tsy tapaka ny fanoherana tsy lalina noho 2MΩ. Raha tsy izany, dia tokony ho ny fitaovana ho an'ny maso sy ny disassembled fanamboarana;
● rehefa afaka tapa-taona ny asa ara-dalàna eo ambany fepetra voalazan'ny miasa, ny herinaratra tokony homarinana avy amin'ny teny paompy noho ny diloilo efitrano famehezana toe-javatra. Raha vao ny menaka dia emulsified na sedimented rano mivoaka, 10 # milina menaka sy ny milina faritra tombo-kase no tokony ho soloina amin'ny fomba ara-potoana;
● iray goavana ny asa fanamboarana tokony hitarihana taorian'ny fandidiana ara-dalàna ho an'ny taona iray: faritra tonta dia tokony ho soloina, fasteners dia tokony ho nandinika sy lubricant tokony nameno ary soloina mba ho azo antoka tsara dia tsara eo amin'ny ara-dalàna lubrication asa;
● Mba manadio ny herinaratra paompy sy hanafoana vakana raha tsy nampiasaina.
Hiasa araka ny tokony Analysis sy Fanafoanana
Tsy fetezana Cause famakafakana fanafoanana fomba
tsy fahampian'ny rano mikoriana, na tsy misy 1.mistaken lelan singa hanitsy misy dingana roa filaharan'ireo ny hery faritra
2.openness sy ny fahafenoana ny fivoahan'ny miditra tsimoramora -maso miditra tsimoramora
3.left rivotra ao amin'ny fantsona miditra tsimoramora eo amin'ny paompy sy ny mahatonga azy sarotra ny hanokatra ny miditra tsimoramora manefa rivotra ao amin'ny fantsona
4.too ambany fihodinan'ny hafainganam-pandeha jereo ny fahefana malefaka famatsiana ho an'ny diplaoma
5.excessive tombo-kase peratra abrasion hanoloana
6.high hakitroky na viscosity ao amin'ny rano hanova ny hakitroky ny rano sy ny viscosity
7. sodina sy ny lelan sakanana manafoana ireo sakana ao amin'ny fantsona sy ny lelany
paompy herinaratra miovaova asa 1.blade fifandanjan'ny hanoloana na hiasa ny mampifandanja ny kodia
2.bearing fahavoazana hanoloana
3.overload asa hanitsy miditra tsimoramora mba tsy ho be loatra herinaratra paompy
4.sliding fametrahana fametrahana indray
insulation ambany fanoherana 1.leakage ao amin'ny wiring faran'ny tariby sy hery faritra hamehezany ary tsindrio ny voanjo mafy
2cable tariby fahavoazana na ny rano miditra amin'ny lohany hanoloana
3.mechanical tombo-kase abrasion hanoloana
4.O miendrika peratra fanombohan-kase be taona sy ny tsy fahombiazana hanoloana
be loatra amin'izao fotoana izao 1.low miasa malefaka zatra miasa malefaka
2.blade sakanana na nitsatoka-up madio sakana ao amin'ny fantsona sy ny rano
3.high hakitroky na viscosity ao amin'ny rano hanova ny hakitroky ny rano sy ny viscosity
4.excessive miditra tsimoramora fisokafana zatra miditra tsimoramora fisokafana
Clog F ree maloto Pump
No Fisakanana maloto paompy
Non-fanakanana maloto Pump
maloto paompy Supplier
maloto ny rano Pump
Submersible Grinder maloto Pump
Submersible maloto Pump
Wqk maloto Pump